Ndi Govano na-achi ala Igbo amaghi ihe a koro?
Ị sị ka ụmụ-Igbo welata Businesị ụmụ-Igbo n’ala Igbo? Ezị-okwu ka ị kwuru,HO! HA! Maka na Igbo tụrụ ilu sị na a na-ama mma site n’ụlọ were pụwa n’ama.
Kedu nke ụmụ-Igbo bụ ọnwa na-etiri Lagọs, na Abụja, ma itiri na-agba n’ala Igbo? Ọlụ adịghị karịkwaa ịtọrọ mmadụ. Miri adịghị karịkwaa miri idoro. Ụlọ-ọgwụ adịghị karịa dogonyaro maka ọgwụ ịba. Ụlọ-akwụkwọ adịghị karịa ebe a na-apụzị kwa ọrịrị were egbu oge, maka na ndị sị na ha gbajiri chọkụ, amaghị aha ha ede cha cha!
Onye gịna ya kwụrụ achụ mmụọ sịzị kwa na gị bụzịkwa mmụọ a na-achụ. Nwa-nne na nwa-nne apụghịzịkwa ịnyụkọ amịrị ọnụ maka na ego abatala.
Igbo bụ Igbo tụrụ ilu sị na enwe abụghị anụ ma eteghị ya n’ofe. Nke a na-akọwa na gị na nwa-Igbo ibe gị ga-emekọta ihe ọnụ, mgbe ego batara ọgụ ada.
Ọ bụrụ na ndị Gọvanọ na-achị ala Igbo chọrọ, ha kwesiri ịtụpụta elulo ka Igbo nyụkọọ amịrị ọnụ ka ọ gbọ ụfụfụ n’ala Igbo,kpọm kwem! Onye a jụrụ anaghị ajụ onwe ya.
Kedụzịkwanụ ka ọkụ sizị nyụa n’ala Igbo dumu? Na Legọs na Abụja, a na-enwe ụgbọ-ala, ụgbọ-elu, ọkụ, ụlọ ogwụ.
Ọ bụzị na ndị Gọvanọ nile na-achị ala Igbo amaghị ihe a kọrọ?